Jubbaland oo mar kale awaamiir ku soo rogtay xaasaska Shabaab ee Kismaayo ku nool | Baydhabo Online
Jubbaland oo mar kale awaamiir ku soo rogtay xaasaska Shabaab ee Kismaayo ku nool
Laamaha ammaanka Maamulka Jubbaland ayaa awaamiir ku soo rogay Xaasaska Ragga Shabaabka ka tirsan ee ku nool Magaalada Kismaayo, xilli Maamulka Jubbaland kol hore ay Kismaayo ka masaafuriyeen Haween badan oo ay ku sheegeen inay yihiin xaasaska Shabaab.
Afhayeenka Laamaha ammaanka Jubbaland Axmed Maxamed Maxamuud (Carab) oo Saxaafadda kula hadlay Magaalada Kismaayo ayaa sheegay inay ka war hayaan dumar badan oo xaaskaska Shabaab ah inay dib ugu soo laabteen Magaalada Kismaayo.
Waxa uu sheegay inay arintaasi u dulqaadaneyn oo laamaha ammaanka ay qaadayaan tallaabooyin ay magaalada uga saarayaan haweenkaasi.
“Maalmo dhexdaas Kismaayo waxaan ka saarnay Kooxda Nabad diidka, Xaasaskooda waxaan ognahay inay dib ugu soo laabteen naagihii, anaga iyo idinka heshiis ma nihin col baa na dhex yaal, dil baa na dhex yaal ninkiina intuu maqan yahay oo cadoow uu yahay, oo Dowlad Goboledka Jubbaland cadoow uu ku yahay naguma dhex jireysiin, mana idin ka yeelayno intaan idin soo baarin oo Magaalada idin ka soo dhex helin Magaalada ka baxa.”
Afhayeenka laamaha ammaanka Jubbaland ayaa sidoo kale sheegay markii laga saaray Xaasaska Shabaabka Magaalada Kismaayo in Magaalada ay noqotay meel ammaan buuxa ah oo dadka ay dareemeen Nabadgelyo.
“Amni buuxa ayaan helnay markaan idin ka saarnay Magaalada Kismaayo gudaheeda, ciidanka Jubbaland ayaa sabab u ahaa Ilaahey ayaa noo qadaray ciidanka Jubbaland ayaana sabab u ahaa, naga baxa intaan idiin soo qabanin, howlgalo ballaaran ayaan sameynaynaa intaan guryaha idin kugu imaanin naga baxa, intuu ninkiina maqan yahay oo Magaalada ka maqan yahay heshiis ma nihin.” Ayuu raaciyay hadalkiisa Afhayeenka laamaha ammaanka Jubbaland
Jubbaland ayaa dagaal adag waxa ay kula jirtaa Ururka Al Shabaab oo qaybo ka mid ah Jubbada hoose iyo Jubbada Dhexe ku sugan.